February 6, 2020 NEWS 4
GAROOWE(P-TIMES) – Madaxweynaha Puntland Siciid Deni ayaa xalay amray in dhammaan wasiiradda Xukuumaddiisu ay la socdaan dhaqdhaqaaqyada Shaqaalaha wasaaradaha iyo Xarumaha dawladda, sidaas oo kalena ay dabagal ku sameeyaan qof kasta oo ay u arkaan in uu diidan yahay siyaasadda Xukuumadiisa, taas oo kamid ah arrimaha cusub ee kusoo kordhay Puntland.
Siciid Deni ayaa talaabadan qaaday saacado uun markii uu Xabsiga dhigay Wariyihiisii gaarka ahaa Cumar Soomane oo ay horey Madaxtooyadu uga keentay magaalada Muqdisho.
Wasiiradda qaarkood ayaa loo gudbiyey Liiska shaqaalaha oo inta badan baraha bulshada ka jawaab-celiya, waxaana kuwa taageera Xukuumadda iyo kuwa kasoo horjeedaba la amray in aysan xarumo dawladeed ka shaqeyn karin.
Go’aanka Madaxtooyada Puntland ayaa muujinaya heerka walaac ee ay qabto, waxaana Madaxweyne Deni aad ugu mashquulsan yahay baraha bulshada iyo la socodkooda, taas oo wax badan ka leexisay jadwalkiisa Shaqo.
Horey wasiiro katirsan Xukuumadda Puntland ayaa uga digay shaqaalahooda, taas oo ay ku amreen in aysan waxba jawaab-celin ah ka bixin karin doodaha ku saleysan waxqabadka dawladda iyo meelaha lagu dhaliilayo.
Sidaas oo kale, qof kasta oo loo arko in uu taageero u yahay dawladda Faderaalka Soomaaliya siyaasadeeda ayaa si gooni ah xilka looga qaadayaa, taas oo ka dhigan waji muujinaya in ay dhamaatay in arrimo siyaasadeed lagu kala aragti duwanaado.
Cabdinuur F, Maxamuud says:
Waxay ila tahay in taasi aysan noqon doonin mid sii socta waayo maanta Adduunku wuxuu gaaray heer ilbaxnimo iyo in Qof weliba oo Fekerkiisa cabbiri karo..
Madaxweynuhu waa inuu tix geliya xornimada Shaqaalaha waa dhab wixii khalkhal gelinaya Hannanka Dawladnimo waa sax in lala xisaabtamo
Maxaa laga baarayaa shaqaalaha ma taageerada N&N ayaa laga uriyay??
N&N waa dawladda metesha dhamaan shacabka Soomaaliyeed,kana xoraynaysa qawlaysatada aka haraagii Jabhadaha SSDF,SNM,USC,SPM oo hadda bilow ah laguna fidinayo dawladnimada Jubbaland waxa loogu yeero,Galmudug waa u jeedeen,Puntland ayaa Ku xigin ilaa Waqooyi laga gaaro iyo Loowyocada.
Hadaan maanta dalkaan baylahda ah la qaban wuxu ka bixin khariirada caalamka.
Fad ama ha fadin waa lagu fadsiin
Ilaa laga takhaluso Fedreaal fidno oo Malez noo meeriyay,lana laalo dastuurka xaaraanta ah ee xaq u siin tuug kastaa in jufediisa meel Ku xirto oo Madaxweyne isugu Waco waa la rafaadin.
N&N ciidanka Amisom iyo ciidamada qaranka ee duleedka Gaalkacayo fadhiya haw dhaqaajiso Puntlad hana la hoos keeno dawlada iyo Mogadishu,hadaan la yeelin dhibku wuu socon,waxana Ku mustaqbal beeli ubadka soomaaliyeed ee daruufaha saameeyeen ee koox maafiyo ahi Password furahiisa ayaka uun hayaan Ku qufushteen ee dawladooda cadowga uga dhigay iyo bahalo.
Waxeey u hayaan looma jeedo waxbarasho tayo leh,shahaada laga aqbalayo dunida,caruurtoodana dibeda ayay geesteen.
Nolosha dadka laguma gorgortamayo maanta,waana laga xorayn kooxaha isku xiran ee eeganaya danahooda dhaqàale,sii jiritaan oo hadii dalka dowlo la wareegto dan uma ahan oo barasaab xataa looma aqbalyo ee maxkamad ayaa la taagin oo lagu ciqaabi qaran dumisnimo,jaajuusnimo ajnebi,dhiig miirato,diidid qarankii oo dib loo dhisa,waxana lagu xakumi ugu yaraan 25 sana oo xarig ah ama toogasho.
Caafimaad uma hayan dadka Ku hoos nool,tacliin,shaqa,baahiyahiisana ma daboolayaan ee waa uun ku danaysanaayaan oo Ku naaxi sidi gafanihii ama bahalkii marku xoolaha dhiiga ka cabo ballaaran jiray.
PUNTLAND SHACABKA WAA DAD FIICAN,EE KUWA MADAXDA U NOQDAY AYAA KHAWANO AH AYNA TAHAY IN LA JARO OO LAGA ADKAADO,LANA GEEYO XABSI,TAARIIKHDODA MADOOWNA LA QORO.
Axmed Soomaali Axyaa Waddani says:
Kacaanka barakaysan ayaa soo gaarin iskuna fidin dalka waa la cayrin tuugada afduubka u heesta bulshada.
TALA SARKAAL HORE UU MADAXDA DALKA U DIRAYO
Qabta dalka ayaan u dirin N&N,kasbadana shacabka soomaaliyeed ee u harrañdan dawlo,caafimaad,tacliin,shaqa isku baahidana ah ee wadaniyiinta ah,kana shida magaala kasto marka la qabto Soomaaliyeey toosoot,toosoo isku tiirsadayee maryaha la surtayna dejiya kuna bedela calanka dalka,ka dibna la wareega aqalka magaalada looga taliyo, tekadaha,kastamyada,tv-yada,Radiyaha,ilaa xaduudaha la gaaro,shacabka waa idin taageerin idinna hor-geli,fartana idliinku fiiqi qaran diidka,khawanada,jawaasiista,Dawo dhilifka
Waxa xigi soo qabashada Khawanada oo fagaare lasoo tuba.
AXMED SOMALi (Kacaan)
Siciid Deni khibrad iyo shahaado aqooneed midna u ma leh waaxda dowladnimada iyo diblumaasiyadda caalamiga. Waa sababta uu isaga oo jagadiisa weli ku cusub ay dad iyo qaybo badan oo Puntland ah gorodda isu la galeen. Dad baa ba lagu galladay fariidnimada iyo farshaxannimada hoggaamineed si kasta oo aanay shahaado iyo khibrad toona u lahayn laakiin isagu khusladahaas xataa aad ayuu uga arradan yahay runtii.
Qaabka uu u dhaqmayo waa kan ay caanka ku yihiin madaxda fashilma ee digteetarnimada is miciin bada marka la soo naco oo wax aan fadeexad ahayn walluusan uga dheefi doonin. Puntland weligeed ba hoggaan dhaqameedkeeda ilbaxda ah iyo shacabkeeda xadaaradda lagu suntay ayay ka noolayd oo kuna dhaqnayd. Siciid Deni kol haddii uu fashilmay waxaa sumcaddiisa u wanaagsanaan lahayd isaga oo hoggaanka si sharaf leh kuxigeenkiisa ku wareejiya oo uu deeto tartiib meesha isaga huleelo si ay Puntland na u badbaaddo.
Reer Puntland Issimadooda ayaa kun jeer uga muqaddassan madaxweynaha oo mar ba haddii ay Siciid Deni isku dhaceen wax isaga u baaqi ah ayaan ba jirin. Waa haddii uu waxgarad yahay.